တရုတ် ရော်ဘာ လက် လှိုင် စက်ရုံ နှင့် ထုတ်လုပ်သူများ - ကွမ်ကျိုး Junshang ကုန်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်။
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လေ Strut ပြုပြင်ပါ ပစ္စည်းများ > ရော်ဘာ လက် ဘို့ လေ Strut > ရော်ဘာ လက် လှိုင်
ရော်ဘာ လက် လှိုင်
The အောက်ပါ ဟုတ်တယ် အကြောင်း ရော်ဘာ လက် လှိုင် ဆက်စပ်, ငါ မျှော်လင့်ပါတယ် ရန် ကူညီပါ မင်း ပိုကောင်း နားလည်သည် ရော်ဘာ လက် လှိုင်.
Junshang ရော်ဘာလက်လက် phaeton 3D0616039ForVW Phaeton 2002-2013 ရှေ့ရော်ဘာဆီးအိမ်
Junshang ရော်ဘာလက် PHAETON 3D0616039 သည်အဆင့်မြင့်ရော်ဘာပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအဆင့်မြင့်အီလက်ထရောနစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ရော်ဘာဆီးအိမ်သည် ၂၅ ကီလိုဂရမ်အထိဖိအားကိုခံနိုင်သည်။
Junshang ရော်ဘာဆီးအိမ်ကိုကွမ်ကျိုးတရုတ်နိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ထားပြီးမူလအရည်အသွေးနှင့်စက်ရုံစျေးနှုန်းမှာ ၁ နှစ်အာမခံဖြစ်သည်။
ရော်ဘာလက် PHAETON 3D0616039
လေထု strut ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်
3D0616039A, 3D0616039AA, 3D0616039AA 3D0616039AC, 3D0616039AD, 3D0616039L 3D0616040A, 3D0616040AA, 3D0616040AB 3D0616040AC, 3D0616040AD, 3D0616040L
ရော်ဘာ + နိုင်လွန်
119 * 85 * 210 မီလီမီတာ
VW Phaeton အတွက် 2002-2013
Junshang ရော်ဘာလက်လက် phaeton 3D0616039ForVW Phaeton 2002-2013 ရှေ့ရော်ဘာဆီးအိမ် is made of high-quality rubber, high-quality nylon and by most advanced electronic digital- controlled machine, Nylon line distribution evenly，the cutting incision smoothly. The rubber bladder can withstand max pressure up to ၂၅ ကီလိုဂရမ်.
hot Tags:: ရော်ဘာ လက် ဖိုးတန် တရုတ် စက်ရုံ, ထုတ်လုပ်သူများ ပေးသွင်းသူများ, လုပ်သည် in တရုတ်
ရော်ဘာ လက် ဘို့ Benz W221 နောက်ဘက်
ရော်ဘာ လက် ဘို့ Benz W220 နောက်ဘက်
ရော်ဘာ လက် ဘို့ Benz W221
ရော်ဘာ လက် ဘို့ Benz W220
ရော်ဘာ လက် ဘို့ Benz W251 နောက်ဘက်
ရော်ဘာ လက် ဘို့ Benz W251